धर्म भनेको लुगा होइन जति खेर मनलाग्यो फेर्न मिल्ने - Sabal Post
धर्म भनेको लुगा होइन जति खेर मनलाग्यो फेर्न मिल्ने
‘मैलें फलानो धर्म परिवर्तन गरें नि ।’ मान्छेहरुले यो कुरा त्यती सजिलै भन्छ कि मानौ, ‘धर्म’ भनेको लुगा हो । ‘धर्म’ के हो ? यस सम्बन्धमा उनीहरुको बुझाई सही छैन । यदि धर्मलाई सही ढंगले बुझ्दो हो त ‘धर्म परिवर्तन’ हुने कुनै त्यस्तो बस्तु होइन ।अहिले थुप्रै मान्छे यस्तै भ्रम पालेर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई ललाई-फकाई फलानो धर्म लिनुपर्छ, फलानो धर्म त्याग्नुपर्छ भनिएको छ । धर्मप्रति उनको कमजोर बुझाईको फाइदा उठाउँदै ‘धर्मका ठेकेदार’हरुले यस्तो चालबाजी चालिरहेका छन् । अतः त्यो कुटिल चालबाजीमा सोझा, निमुखाहरु परिरहेका छन् । किन धर्मको नाममा यस्तो चालबाजी हुन्छ त ? यसको जवाफ खोतल्नुअघि धर्मबारे केही बुझ्न उपयुक्त हुन्छ।धर्म के हो ?-धर्म त्यही हो, जुन काम तपाईं साँचो, सत्य, सही गर्नुहुन्छ । तपाईंले गर्ने ति तमाम काम धर्म हो, जसमा श्रम, इमान्दारिता, सत्य मिसिएको छ । अर्थात सही ढंगले गरिने सही कर्म नै धर्म हो । यस्ता कर्मले तपाईंको जीवन सरल र सहज त हुनेछ नै, अरुको पनि हित हुनेछ ।खासमा तपाईंले गर्ने त्यो कर्म असलमा धर्म हो, जसले अरुको दुःख, पीडा, समस्या, अभाव टारिदिन्छ । धर्मबारे धेरै शब्दजाल बुनिरहनु आवश्यक छैन । यसलाई एउटै शब्दमा बुझ्दा हुन्छ, धर्म भनेको उपकार हो । कल्याणकारी काम हो ।कुनै स्वार्थ नराखी कसैप्रति पूर्णत सेवाभावले गर्ने कर्म पनि धर्म हो । असाहयप्रति तपाईंले दर्शाउने स्नेह भाव र गर्ने सेवा पनि धर्म हो ।
कसैका लागि गरिने पूण्यको काम पनि धर्म हो । सत्य र साँचो कुरामा सधै अडिग रहनु पनि तपाईंको धर्म हो ।ति आडम्बर हुन्=पूजापाठ गरेर, देवतालाई भेटी चढाएर, मन्दिर धाएर, बिहान-बेलुकी आरती गरेर, पुराण लगाएर, ब्रत बसेर धर्म हुँदैन । यी आडम्बर हुन्, जबसम्म यी कुरालाई तपाईंले विधीपूर्वक र बुझेर गर्नुहुन्न ।यदी यी कुराको अर्थ र मर्म बुझेर, विधीपूर्वक गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहि त्यसबाट तपाईं लाभान्वित हुनुहुनेछ । किनभने यी सबै विधी-विधानले तपाईंको मन र शरीर शुद्धिकरण गर्नेछ । यी आफैमा धर्म होइनन् । तर, धर्ममा पुग्ने बाटो हुन् । अर्थात तपाईंमा धार्मिक प्रवृत्ति विकास गराउने माध्याम हुन् ।ति धर्म होइनन्=तपाईंको जन्म, न्वरान, विवाह आदि विधी कुन पद्धतीबाट गर्नुभयो ? हिन्दु, इसाई, बौद्ध, मुश्लिम । वास्तवमा हामीले धर्म भनिरहेका यी कुरा धर्म होइनन्, पद्धती हुन् । जीवनलाई सही, सत्य र सन्तुलित ढंगले डोहोर्‍याउने एक प्रणाली हुन् । यी आफैमा धर्म होइनन् ।हिन्दु धर्म होइन, इसाई धर्म होइन, मुस्लिम वा बौद्ध धर्म होइन । संस्कार हो । पद्धती हो ।हाम्रो जीवनलाई समुन्नत ढंगबाट डोहोर्‍याउने प्रणाली हुन् । यी कुनैपनि पद्धतीलाई नियमपूर्वक एवं अनुशासित ढंगले आत्मसात गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई सही र सन्तुलित रुपमा जिउन सक्छौ। चराचर जगतसँग जोडिएर कसरी जीवनको सौन्दर्य खोज्ने भन्ने कुरा यी पद्धतीबाट थाहा हुन्छ।
अतः हामी जन्मेको भूगोल, हावापानी वा भनौ समग्र प्रकृतिको लयसँग तालमेल मिलाउनेगरी यी संस्कार एवं पद्धतीको विकास भएको छ । त्यसैले आफ्नो धरातल अनुसार कुन पद्धती अपनाउने भन्ने कुरामा तपाईंले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।तपाईंले हिन्दु पद्धती अंगाल्दैमा, इसाईहरु पापी हुँदैनन् । पराई हुँदैनन् । तपाईंले इसाई पद्धती अंगाल्दैमा हिन्दुहरु सैतान हुँदैनन् । यस्ता झेली शब्दजाल त तिनीहरुले नै समाजमा छरेका हुन्, जसले धर्म र संस्कारको भेद नबताई त्यसलाई आफ्नो कमाउ धन्दा बनाइरहेका छन् ।किन हुन्छ ‘धर्म’को चलखेल =तपाईंलाई यदि कसैले फलानो धर्म लिनुपर्छ भनेर ललाई-फकाई गर्छ भन्ने प्रष्ट हुनुहोस्, ति व्यक्ति ‘धर्म’का व्यापारी हुन् ।अहिले समाजमा छ्यापछ्याप्ती यस्ता व्यापारीहर प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुले सोझा, निमुखा व्यक्तिलाई आफ्नो फन्दामा पार्ने गरेका छन् । यसरी उनीहरुलाई आफ्नो जत्थामा समावेश गरेपछि उक्त व्यक्तिमाथि आफ्नो अघोषित शासन चल्छ भन्ने नियतबाटै यस्तो काम हुन्छ ।जब तपाईंले उनीहरुको सर्त बमोजिम ‘धर्म परिवर्तन’ गर्नुहुन्छ, तब अनेक किसिमको स्वार्थ तपाईंमाथि लादिनेछ । तपाईंमाथि भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुनेछ । तपाईंलाई उनीहरुले पूर्णत आफ्नो जत्थामा सामेल गरिसकेपछि उनीहरुले तपाईंबाट आर्थिक लगायतको लाभ लिनेछ । उनीहरुले आफ्नो प्रचार सामाग्रीदेखि अन्य थुप्रै बस्तु तपाईंलाई भिराउनेछ । यसरी तपाईं थाहै नपाई उनीहरुको एक इमान्दार र अन्धभक्त ग्राहक बन्नुहुनेछ ।
चक्र्पातको डर :भारतको गुजरातमा चक्रपातको डरले पाँच…
तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेका बिभिन्न निणर्य र कामप्रति…